Degmadda Wanlaweyn: Haween & Caruur oo ‘Haraad’ u dhintay – idalenews.com
WanlaweynMaamulka Degmada Wanlaweyn, ee Gobolka Shabeellha Hoose ayaa sheegay Maanta oo Axad ah in Haween iyo Caruur badan ay Haraad ugu geeroyoodeen Deegaano hoostaga Degmadaasi.
Xoghayaha Maamulka Degmada Wanlaweyn Maxamed Macalin C/laahi, ayaa sheegay in ugu yaraan 5 Qof ay Haraad ugu geeriyoodeen 48-Saac ee lasoo dhaafay inta u dhaxaysa Degmada Wanlaweyn iyo Deegaanka Toora-Torow.
“Xilliga waa Jiilaal, Kuleyl ba’an ayaa ka jira Gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka Reer Baadiyaha ah ma haystaan Biyo waayo waxa ay ku nool yihiin Deegaanno ka fog Magaalooyinka Ceelal Biyaha laga cabana ma haystaan, Wartii Biyahana way Gurtay. dhamaatay,” ayuu yiri Macalin C/laahi.
Macalin C/laahi, ayaa sidoo kale sheegay in Tuulooyinka ay Biyo la’aanta ka jirta ee ku yaalla inta u dhaxaysa Wanlaweyn iyo Tuura-Torow ay kusoo barakaceen Dadkii kasoo cararay Dagaalada ka socda Qoryooley iyo Buulo Mareer, iyadoo meesha ugu dhow ee ay Biyaha ka heli karaan ay tahay Qoryooley iyo Wanlaweyne, waxaana ay u jiraan 3oKm.
Wuxuu sheegay in Maanta Maamulkiisa ay n saakay ay Booyado Biyo ah gaarsiiyeen Deegaanada ay Biyo la’aanta ka jirto, hase ahaatee aysan intaasi ku filnayn Xaaladda hadda taagan marka loo fiiriyo.
Macalin C/laahi, ayaa ugu baaqay Dowladda iyo Hay’adaha in ay Gar-Gaar gaarsiiyaan Shacabka Soomaaliyeed ee Haraad ugu dhimanaya Gobolka Shabeellaha Hoose qeybo kamid ah.
Idale News Online, Wanleweyn.
Daawo Munaasabada Xuska 45aad ee Aasaaska Ciidanka Xoogga Dalka Somalia